दुब्लो म र म्यासेज ::जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
दुब्लो म र म्यासेज
– सिराज शर्मा
‘तिमी त कति दुब्लाएछौ, पहिलाभन्दा पनि दुब्लो छ्या अलि मोटाउनु प¥यो । साह्रै नराम्रो पो देखियो त ?’ लामो समयपछि भेटिएकी असल मित्रले भनिन् । केटाहरुले भनेको भए पनि अलि कम रीस उठ्दो हो । रीसले तिरीमिरी भएपनि सम्हालिँदै भनें–‘हात्ती जति नै ठूलो भएपनि के गर्नु र ? जंगलको राजा त सिंह नै हो क्यारे, भद्दा शरीर बोकेर के गर्नु छ र ? आफैंलाई भारी ।’ आफु दुब्लो पातलो हुुनुको पीडा कम गर्दै मैले भनें । किन यसरी मान्छेहरु मान्छेको संवेदना नबुझिकनै प्वाक्क बोलिहाल्छन्, अचम्म लाग्छ ।
काठमाडांैको रमझमबाट लामो समयपछि घर पुगें । साथीहरुलाई गफ चुटौंला नि त लाहुरे पारामा भन्ने के सोच्या त आफ्नै बाईकबाट झरेर भुईंमा खुट्टा राख्न पा’को छैन चन्द्रेले भनिहाल्यो–‘हरे यसको ताल ! काठमाडांैमा के के न होला भन्ठान्या त उल्टो दुब्लाएर पो आएछ । काम छैन त्यो काठमाडौं । राजधानी भएर मात्रै हो ! फोहोर, धुलो, धत्त ! सम्झिँदा पनि वाक्क लागेर आउँछ ।’ धनेले थप्यो–‘काठमाण्डौ पनि कहीँ बस्ने ठाउँ हो ? त्यो त फोहोरको डंगुर । बरु, यतै बसेर खेती गर केटा, महिनामा कम्तीमा १० हजार त बच्छ । खाई न पाईसँग यो पेट मारेर काम गरेर के फाईदा ? हाम्लाई हेर्न कत्तिको मोज छ, खाली सुविधा अलि कम भो भन्ने त हो ।’ एकोहोर भट्भटायो मुर्दो । बेक्कार घर गए जस्तो भो । खाना खाँदै गर्दा आमाले भन्नुभो–‘ट्याममा खान नपाएर आन्दै्र सुकेछ नि, फर्किंदा घरमै बना’को अलिकती घिउ छ लेर जानु ।’ ए बाबा अब त अति नै भो । जो भेट्यो त्यस्तै, दुब्लो र पातलोको कुरा । एउटाले त मेरो उदाहरण दिएर मेरै साथीलाई भनेछ–‘हेर यो दुब्लाएर अमरे जस्तै पो भएछ ।’
घरबाट फर्केपछि सँगै पढेकी साथी मनिषाले तिमी काम मात्रै भन्छौ, कति कमाउँछौ भनेर सोधी । उषाले कति कमाउँछौ हैन कति बचाउँछौ चैं सोध्न भनेर मैं तिर आँखा लाउँदै व्यंग्य गरी । हुन त कैलेकाहीँ भेट हुँदा खाजाको बिल आफुले तिर्ने ग¥या भए यो व्यंग्य आउँदैन थ्यो कि भन्ने लाग्यो । ग्लानीले पिउन लागेको कालो चिया पनि तितो भएर आयो । यसो सान्त्वना दिने र माया गरेको आभाष दिने मनिषालाई पनि अर्कै देखें । बिहानदेखि राती अबेरसम्म काम गरेको पनि बेकार लाग्यो । मान्छेले देख्दा के–के न कमाए जस्तो, आफ्नो भने महिना बित्नै गाह्रो । यस्तै सोचिरहेको के थिएँ, राहुलको आईफोन फाईभको रिङटोनले झसङ्ग पा¥यो । सबैसँग बिदा माँगेर लागियो कोठातिर ।
कोठामा पुग्दा तितो सत्य टेलिफिल्म आईरहेको थियो । फोनको घण्टी बज्यो । हेरें मनिषाको कल, उठाउनै मन लागेन । फेरी के सोच्ली भन्ने लागेर उठाएँ, सोधी–‘घर पुग्यौ ?’ ‘अँ’ मेरो उत्तर । ‘भोली हामी मात्र भेटौँन हुन्न ? केही कुरा गर्नु छ तिमीसँग, फुर्सद छ ?’ साथीहरु भेट्ने दिन तोकिएको समयमा नपुग्नेमध्येको म पनि एक हुँ । त्यै भएर फेरी व्यंग्य गरेजस्तो लाग्यो । ‘म अबको एक हप्ता बिजी छु ।’ अलि कडा मिजासमा मैले भनें । ‘ए, अतिकति व्यक्तिगत कुरा गर्नु थ्यो, ठीकै छ, तिम्रो फुर्सद भएपछि मलाई कल गर न ल ! अनि भेटौंला ।’ उसले फोन राखी । बिहानको बाँकी रहेको खाना तताएर खाईसकेपछि पल्टिएँ । मेरो व्यवहार आफैंलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । मान्छेको भीडमा मेरो कमी कमजोरी कहिल्यै नखोतल्ने मनिषालाई गरेको व्यवहारप्रति आफैंलाई नमज्जा लाग्यो । उसले गरेको एक–एक सहयोग सम्झें । कलेजको भर्ना हुने म्याद सकिए पनि उसैले स्ववियूको पावर लाएर मेरो भर्ना गर्देकी थी । कामको सिलसिलामा उपत्यकाबाहिर हुँदा परिक्षा फर्म भरेर पैसा समेत उसैले तिरिदिएकी थी । पछि तिर्न खोज्दा पर्दैन त भन्दै थी, म स्वाभिमानी बन्न खोजेर मात्रै हो, नत्र त्यो पनि लिन्नँ भन्थि । विगत सम्झेर फोन गरेर भेट्छु भन्ने सोचें, फेरी आ ! मर्द भएर के लाचार हुनु भन्ने पनि लाग्यो, कल गर्नै लागेको मोबाईल पनि राखें ।
उसको एउटा बानी भने अचम्मको । एक्लै भेटी भने गाली मात्रै गर्थी । यो भएन, त्यो भएन, कहिलेकाहीँ फेन्सी भएर हिँड । समयमा खाउ । मलाइ विदेश पढ्न जा भन्छन् के गरुँ ? यस्तै गुनासा गर्थी । एकदिन अलि फेन्सी टाइपको केटासँग आउँदा भन्थी हेर, विनयको जस्तो लुकिङ हुनुपर्छ । त्यस्तै बनेर हिँड भन्थी । मलाई लाग्थ्यो उसको ब्वाईफ्रेण्ड होला हाम्रो अगाडि फूर्ति देखाउँछे । जिस्केर कैलेकाहीँ ब्वाईफ्रेण्ड छ भन्दा हाँस्थी । मलाइ नजिकिन मन लागेन । यस्तैमा एक हप्ता बित्यो । अफिसमा काम गरिरहेको बेला उसैले फोन गरी । ‘तिमीलाई भेट्नै पर्ने छ, कुरा गर्न मिल्छ ? एउटा ईम्पोर्टेण्ट काम छ, फूर्सद छ ?’ फूर्सद छ भन्ने शब्दबाटै वाक्क भैसकेको म अहिले अलि बिजी नै छु बेलुका कल गर्छु भनेर फोन काटें । बेलुका घरपुग्दा लोडसेडिङको मारले मोबाईल चार्ज गर्न पाईएन, त्यतिकै सुतें ।
महिना मरेको भोलीपल्ट तलब आउने दिन बिहान उठेर कालो चिया खाईसकेपछि बाहिर निस्किन के खोज्या त कुन पार्टीको नेपाल बन्द रे । धत ! अब त नेपाल बन्द पनि सुटुक्क–सुटुक्क हुन थालेछ, नेपालका पार्टी देखेर झनक्क रीस उठ्यो । समय मैं घरभाडा तिरेर ईज्जत जोगाउने सपना पनि तुहियो । ‘ओई अमरे, आज त नेपाल बन्द हामी तेरोमा आउँदै छौं है, हामी तीनै जना छौं, आज नेपाल बन्द भै गो । अब दिनभरी म्यारीज खेलिन्छ, तयार भएर बस् ।’ राहुलले फोनमा भन्यो । बन्दै त भो भने कोसँग काम गर्नु । एक्लै धुम्धुम्ती बस्नुभन्दा त टाईम पास पनि राम्रै हुने भएकाले मैले पनि हुन्छ भन्दें ।
कोठामा पस्नासाथै तीन बुक तास निकाल्दै अभयले पाँच–पाँच रुपैयाँ बोर्ड हानुँ भन्ने प्रस्ताव राख्यो । त्यो प्रस्ताव एकै सट्मा पास भो । राहुलले आज बन्दको दिन हो, केटा हो मोबाईल सोबाईल सबैको अफ गरौं नत्र डिस्टर्व हुन्छ भन्यो । त्यो प्रस्ताव पनि पास भो । ‘कसैको ईम्पोर्टेण्ट फोन आयो भने’ मैले भने । ‘कसैको नआउने फोन यसको आउँछ । महिनामा एकपल्ट जति चैं नेपाल बन्द भा’कै राम्रो । कति काम गर्नु ? प्रधानमन्त्री त नेपाल बन्दको दिन दिउँसै सुत्छ रे ! तँ चैं प्रधानमन्त्री भन्दा पनि ठूलो परिस् कि क्या हो केटा ?’ बोल्नै नसक्ने गरी झपारे । बेलुका पाँच बजेपछि खेल सकेर एकछिन घुम्न निक्लेको फोन बोक्नै बिर्सेछ । होस भन्ने लाग्यो । घर फर्किदा बाहिरै खाना खाएर फर्किएँ ।
भोलीपल्ट मोबाईल स्विच अन गरें म्यासेज आ’को रे’छ, म्यासेज पढ्न नपाउँदै गाउँका काकाको फोन आयो–‘बाबु केटीको जुन कुरा थ्यो नि, सबै कुरा ठीक भयो । केटीका परिवारले पनि मन पराए, तर केटीले चैं केटो अली पातलो रे’छ भनी ।’ रीसको पारो कम्ता तातेन । तेल्लाई अलि मोटो केटो खोजेर बे गर भन्दिनुस् काका भन्न मन लाग्या थ्यो, काकाले के सोच्लान् भनेर ठीकै छ नि त काका, भनेर फोन काटें । यो दुब्लो भाकोमा आफैंलाई पनि रीस उठ्यो ।
‘तँ मोटाउने भए दिनको एक गिलास वियर खा’, गाउँका एकजना मैं जस्ता दाईले भने । आफु त यस्ता छौ, के उपदेश दिन्छौ दाजु भन्न के खोज्या थें, उनैले थपे–‘आफुलाई त मोटाउनै मन नलागेर हो, नत्र त म आद्नान सामी जस्तो भैसक्थें । तिनलाई सामी दुब्लाएर मंै जस्तो भैसक्या के था ? रीस उठे पनि हाँसें । दैनिक योगा गरे मोटाईन्छ भन्ने सल्लाह दियो अर्कोले । एक दुईदिन त वियर पनि नखाको काँ हो र ? यो महँगीको वियर के खान सकिन्थ्यो । कोही जुस खा, कोही जीम जा, कोही मोटाउने औषधी खा, के–के हो ? के–के । याँ मोटाउनु चैं किन प¥यो ? मनमनै भनें । अब्राहम लिंकनले विश्व हल्लाए, हाम्रा अवकास प्राप्त प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराई पनि पातलै थिए । पछि पो बालुवाटारको मिठो मसिनोले मोटाका हुन् त । यो मोटाउने भन्ने चिज चैं यस्तै रे’छ, समय आएपछि आफैं होला भन्ने सोचेर कोठा नजिकैको पसलमा बसेर पत्रिका हेर्दै थें, पछाडिबाट कसैले काँधमा हात राख्यो । हेरें विनय रे’छ । ‘मनिषालाई भेट्यौ ?’ तिम्रो गर्लफ्रेण्ड मैले किन भेट्नु भन्न मन लाग्या थ्यो, उसैले थप्यो–‘उ त अष्ट्रेलिया गै नि, तिम्लाई भेट्न एकदमै आतुर थी, भेटेनौ ?’ सिधै तिमी उसको ब्वाइफ्रेण्ड हौ नि रोकेनौ ? भन्न नसकेर ‘तिमीले नजाउन भनेनौ त ?’ सोधें । ‘परिवारको जवर्जस्तीले नि, उसले त काँ मानेकी थि र ? मैले रोकेर रोकिनलाई म को हो र ? उसले मन पराउँथी तिम्लाई ।’ म छाँगाबाट खसें, एकपल्ट अँध्यारो भएर आयो । सम्हालिँदै ‘ए’ भनें । ‘जाने बेलामा तिमीलाई खुब मिस गरी, तिम्लाई भेटेर सबै कुरा भन्छु भन्थी बिचरीले भेट्नै पाईन छे । एयरपोर्ट पुग्दासम्म पनि तिम्लाई नै सम्झिराथी ।’ मसँग बिदा हुनै लाग्दा विनयले एउटा चिटजस्तो कागज मेरो हातमा थमाईदियो ।
घर पुगेर मोबाईलमा बिहान पढ्न नपाएको म्यासेज हेरें, उसैको रेछ । ‘एक हप्तासम्म कोशिस गरें भेट्न सकिँन, माफ गर, तिमीलाई माया गर्छु भन्न पनि सकिँन । तिमीसँग छुट्न मन थेन परिवारले मानेन । सबै कुरा भेटेर सुनाउन खोजें मिलेन । तिमी व्यस्त छौ, समय मैं खानु, पीर बढि नलेउ । सक्छौ मलाइ कुर, नत्र मेरो गुनासो छैन । तिमी बौद्धिक छौ र परिश्रमी पनि, माया गरिरहन्छु । तिम्रो सेकेण्ड ईयरको एड्मिसन गर्देको छु, पछि चाहिन्छ होला भनेर विनयलाई रसिद दे’को छु ल…’ त्यसपछिका शव्दहरु पढ्नै सकिनँ, मन एकतमास भो ।